UCarrie, Ibali lokuSetyenziswa gwenxa kweSikolo, uStephen King wobugcisa | Uncwadi lwangoku
UCarrie, ibali lokuxhatshazwa esikolweni
UJuan Ortiz | | into engeyonyani yebuchwepheshe, Ababhali, Iincwadi, Uloyiko
USissy Spacek, ophambili 'kaCarrie', ifilimu esekwe kwinoveli enegama elifanayo elibhalwe nguStephen King.
UCarrie wapapashwa ngo-1974 eMelika, yayiyimpapasho yokuqala yombhali uStephen King, kwaye yamzisela udumo. Nangona kunjalo, yayiyincwadi yakhe yesine ebhaliweyo. Kubekho uhlengahlengiso lwayo olu-4, iifilimu ezi-3, ezimbini zemovie kunye nomabonwakude.
Umbhali ubhale lo mdlalo ngokusekelwe ekuxhatshazweni ngamantombazana amabini esikolweni, nokuba angaqonda ngokuthe ngqo. Ibali lakhe ngumfanekiso wabasetyhini abaninzi abaselula abaphathwa kakubi kwiindawo ezifanelekileyo ezikhuselekileyo kubo. Eli lilizwi lakho.
1 Ukuphathwa gadalala ekhaya, ukuzithemba okuphantsi
2 Ukuphathwa gadalala esikolweni, ukuphela okuyintlekele
3 Kancinci ngoStephen King
Ukuphathwa gadalala ekhaya, ukuzithemba okuphantsi
UCarrie uyintombi yomama ophambeneyo ngokwenkolo, uMargaret White. Ukuzijonga njengomoni ngokuba nobudlelwane notata kaCarrie, obashiyileyo bobabini, umfazi ucinga ukuba intombazana sisohlwayo esivela kuThixo ngenxa yokunikezela kwiminqweno yakhe yenyama. Ukwenza izinto zibe mbi ngakumbi, uMargaret ukholelwa ukuba unenjongo yokuthintela uCarrie ekubeni ngumoni njengaye.
Ukugcina intombi yakhe emsulwa, lo mfazi uyamthoba kwintuthumbo yengqondo: Usebenzisa inkqubo yokohlwaya ngokubetha, ukoyika uThixo kunye nokuzahlula kwilizwe langaphandle. Ndiyabulela ukuphathwa gadalala kukanina, uCarrie ukhule eyintaka ebuthathaka, ehlala emanzi, engakwaziyo ukubhabha.
Ukuphathwa gadalala esikolweni, ukuphela okuyintlekele
Ukuhlala yedwa, uCarrie wayengenalo nofifi lokuba angadibana njani nabantu abancinci esikolweni sakhe, kwaye babemenza intlekisa. Njengenxalenye yomnqweno kaMargaret wokubamba intombi yakhe i-pristine, akazange aluchaze utshintsho olwenzeka emzimbeni wabasetyhini, kwaye wathi xa esenza utshintsho kwintombazana esiya emfazini, uCarrie waphulukana nokuzilawula, emva kokuhlukunyezwa ngoontanga bakhe beklasi.
UStephen King, uCarrie Umbhali- (EFE)
Ngenxa yako konke oku kuphathwa gadalala, intaka encinci yaba sisiharpy esinengcwangu. Yonke into yenzeka ngesantya esiphezulu, ishiya umfundi exhalabile njengoko ibali liqhubeka. Incwadi ekufuneka ifundwe nguye nawuphi na umthandi wohlobo olo, hayi ngelize uStephen King uthathwa njengomnye wabo ababhali ababalaseleyo baseMelika.
Kancinci ngoStephen King
UStephen King Wazalelwa ePortland, eMaine, ngoSeptemba 21, 1947, Ungomnye wababhali benoveli abasasazekayo namhlanje. Ukwavelele ekubhalweni kweentsomi ezingaphezu kwendalo, intsomi, imfihlakalo kunye noncwadi olumnandi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » into engeyonyani yebuchwepheshe » UCarrie, ibali lokuxhatshazwa esikolweni
Iimbali ezivela ehlathini nguHoracio Quiroga: i-classic yeencwadi zaseLatin American
UStephen King, inkosi yoloyiko